Poutine, ibe na chiiz na ihendori - Ntụziaka | Ntụziaka
Poutine, ibe na chiiz na ihendori
Alicia tomero | 23/03/2021 10:00 | Ndị mbido, Menmụaka menus, Nduku Ezi ntụziaka, Ntụziaka Chiiz
Nri a dị mma maka mgbakwunye bara ụba na menu ọ bụla ma ọ bụ dị ka nri. Ihe poutine Ọ bụ ụdị nri ndị Canada na-eri ibe, na iberibe chiiz na anụ nri pụrụ iche. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na Canada na ụlọ ahịa ya n'okporo ámá. Nkwadebe ya dị mfe ịme, naanị ya nwere ihendori pụrụ iche akpọrọ Gravy, iji kwadebe tupu oge eruo.
Ntụziaka ụdị: Poutine, ibe na chiiz na ihendori
Nri oge: 20 m
Oge niile: 35 m
2 ọkara poteto
2 wedges nke ọkara gwọọ cheese
250 ml mmiri
1 tablespoon nke ọka wit ntụ ọka
1 tablespoon nke anụ uche. Bovril ihendori.
1 mbadamba anụ na-etinye uche
200 ml nke mmanụ frying
Mpekere nke ala ojii
Anyi bidoro site n’ime ite ofe anyi. Na obere ite anyị na-agbakwunye 250 ml mmiri na mbadamba anụ uche. Anyị na-ekpo mmiri ọkụ ruo mgbe mbadamba nkume ahụ gbazee.
Anyị na-agbanye ngaji ntụ ọka na anyị na-akpali ngwa ngwa ka ọ na-agbaze ma hapụ obere lumps ga-ekwe omume. Iji wepu lumps ndị nwere ike, anyị nwere ike ịgafe ihendori site na nhụcha, yabụ ọ ga-adị mma ma dịkwa nro.
Anyị na-alaghachi ikpo ihendori ma gbakwunye tablespoon anụ uche. Anyị na-ahapụ ya ka o sie nkeji abụọ ma wepụta ya.
Anyị bee na bee nduku n'arọ di iche iche. Anyị na-etinye ha ka ha ghee na ite na mmanụ.
Mgbe frying, anyị na-ewepụ ha ma debe ha na efere. Anyị na-agbakwunye nnu nke nnu.
Anyị na-edebe n'elu chiiz mere iberibe mgbe nduku ka na-ekpo ọkụ.
Anyị na-akụghasị n'elu ọkụ ihendori ya mere chiiz nwere ike gbazee ntakịrị. Anyị na-agbakwunye tuo nke oji ojii n'elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Ntụziaka » Ndị mbido » Poutine, ibe na chiiz na ihendori
O doghi m anya etu esi esi edozi nri anụ
Ezigbo ozi. Daalụ maka ịkekọrịta ya. Daalụ pmd
Onyinye na yogọt, ezigbo na ìhè
Gelatin na ude achicha. Ihe eji eme anwansi.